Chonga uhlobo lochwethezo: amaqhinga okwazi ukuba loluphi uhlobo lohlobo olusetyenzisiweyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Khawube nomfanekiso ngqondweni woko kwenzekayo. Ukhangela i-Intanethi kwaye ufake i-pdf, iwebhu okanye ubona ibhena yentengiso kwaye uthandana nothicilelo abalusebenzisileyo. Kodwa, zininzi kangangokuba akunakwenzeka ukuba uchonge uhlobo lochwethezo oluphambi kwakho!
Sukuba nexhala, kuba kwiminyaka embalwa edlulileyo ezinye iindlela zokuchonga ifonti zikuncedile ukuze ngoku ufumane ifonti echanekileyo. Ewe inyathelo elilandelayo kukufumanisa ukuba ngaba uhlawulelwe okanye ukhululekile. Kodwa iya kuba sisihloko esinye.
1 Yintoni uhlobo lochwethezo
2 Amaphepha okuchonga iifonti
2.1 Chonga uhlobo lochwethezo ukuba yintoni iFonti
2.3 Chonga ifonti nge-WhatTheFont
2.4 Isilinganisi sefonti
2.5 Chonga ifonti nge-Identifont
2.6 Chonga uhlobo lochwethezo ngeFotohop
Yintoni uhlobo lochwethezo
Ngaphambi kokuba uqale ukukunika ukhetho lokuchonga uhlobo lohlobo lochwethezo, kufanelekile ukuba uyazi kakuhle into esibhekisa kuyo. Kwaye yile typography ayilulo uhlobo olusetyenziswayo, kodwa sithetha ngomsebenzi wokukhetha kunye nokusebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zoonobumba, amanani kunye neesimboli ukuze ukwazi ukwenza imisebenzi yokuprinta (okanye, kule meko, kwi-Intanethi. ukubonakala).
Ngokwe-RAE, typography "yindlela okanye isitayile ekuprintwa kuso isicatshulwa." Oko kuthetha ukuba ayixhomekekanga kumagama kuphela, kodwa nakwiseti yonke eya kuba yinxalenye yale projekthi. Umzekelo, kwiphephandaba, apho zombini umfanekiso kunye nemibhalo ekuyo iphumelela.
Ngaphakathi kokuchwetheza, icandelo elibaluleke kakhulu "kukufundwa" kweeleta. Kuyo kwenziwa uhlalutyo lwe-anatomy yeleta, okt ukuphakama kwayo, iringi, ukunyuka, ingalo, ukuthambekela ... Zonke ezi zinto zibaluleke kakhulu kwaye abantu abenza iifonti bazithathe akhawunti xa usenza eyakho uyilo.
Yiyo loo nto, namhlanje, zininzi kakhulu, zahlulwe phakathi kwabo bahlawulwayo kunye nabakhululekileyo. Kodwa ezo zisetyenziselwa ukusetyenziswa buqu okukodwa, zisetyenziselwa urhwebo okanye zifumaneka simahla.
Amaphepha okuchonga iifonti
Ngoku, ngenxa yeli nani likhulu lamagama, kunye nokuba kunokwenzeka ukuba kwenziwe iifonti ezintsha, ihlala ikwenza ukuba uhlangane nenye oyithandayo, okanye ufuna ukwazi ukuba ibizwa njani, nokuba yeyokuyisebenzisa okanye kuba ibukeka intle kakhulu. .
Ingxaki kukuba kumaphepha ewebhu, iibhena kunye neminye imisebenzi yokuprinta (ephepheni okanye kwi-Intanethi) abayitsho into ebizwa ngokuba luhlobo lochwethezo okanye ungayifumana njani. Ke, ngaphambili, ubushiyekile ufuna ukwazi ukuba yintoni. Ngaphambi.
Ngoku sineendlela ezininzi zokuchonga ifonti, ke siyishiya apha ngezantsi:
Chonga uhlobo lochwethezo ukuba yintoni iFonti
Eli lelinye lamaphepha onokuwasebenzisa ukuzama ukufumana ukuba ngubani igama lohlobo lohlobo oluthandileyo. Indlela ilula kakhulu kuba into ekufuneka uyenzile kukufaka ifoto yoshicilelo. Ewe kunjalo, zama ukungabinobunzima obungaphezulu kwe-1,8MB okanye iyakwaliwa, kwaye ine-jpg, i-gif okanye ifomathi ye-png. Olunye ukhetho kukubonisa i-url apho ukhoyo umfanekiso.
Injini yokukhangela iya kujongana nokusixelela ukuba loluphi uhlobo lohlobo enalo kwaye iya kusixelela nokuba singayifumana phi. Kodwa ikwavumela ukuba uyixelele ukuba ikubonise kuphela ezasimahla okanye ezihlawulelweyo (okanye zombini).
Nantsi enye inkqubo, enokuba lula ngakumbi kunangaphambili. Ngokukodwa kuba sithetha ngolwandiso lwesikhangeli se-Chrome onokulufaka kwimizuzwana embalwa. Kwaye isebenza njani? Kulula kakhulu. Konke okufuneka ukwenze kukubeka isalathisi phezu kweleta ofuna ukuyichonga kwaye ibhloko iya kuvela apho baya kukuxelela uhlobo lwefonti, igama layo, ubunzima besitayela ...
Kuphela kufuneka uyikhangele kwi-Intanethi ukuze uyifumane.
Chonga ifonti nge-WhatTheFont
Esinye isixhobo, ngeli xesha sikwi-intanethi, kwaye sinxulumene nephepha leMyFonts apho unokufumana iifonti ezahlukeneyo zoonobumba. Kule meko isebenza ngendlela efanayo naleyo yangaphambili. Oko kukuthi, ifuna ukuba ulayishe ifoto ukuze ibone uhlobo lwefonti, kwaye emva koko iya kukunika uluhlu lweefonti ezinokubakho ezikufutshane naleyo uyilayishileyo.
Kule meko, amaxesha amaninzi unokungayifumani eyona nto ikhoyo, kodwa iya kukunika uluhlu olunezinto ezifanayo kwaye ziya kuxhomekeka ekusebenziseni ofuna ukukunika ukusebenzisa enye okanye enye.
Olunye ukhetho lokuchonga uhlobo lochwetheza yile, ekwafuna ifoto, esemgangathweni ophezulu kwaye ikufutshane kangangoko kwiileta, ukubachonga. Kwaye wenza njani? Ewe, kufundwa ii-glyphs zoonobumba. Kwimeko apho ungazi, ii-glyphs ziimilo ezinazo ifonti, oko kukuthi, uyilo lwayo okanye indlela oonobumba abazotywe ngayo (ukulandela iinkcukacha zezi).
Ke, iya kukunika uthotho lweziphumo ezinxulumene naleyo uyikhangelayo, kodwa ezi ziya "kuncitshiswa", kuba ngabo kuphela abaneFontspring, inkampani apho bathengisa iifonti, abaya kungena.
Chonga ifonti nge-Identifont
Igama lithetha yonke into. Iinjongo zayo kukuchonga uhlobo lochwetheziweyo, kodwa, ngokungafaniyo nezo zangaphambili, indlela ezijongeka ngayo isekwe kwiinkcukacha zabalinganiswa, kwaye hayi kakhulu kumfanekiso onokuba nawo.
Ngapha koko, uya kuba nakho ukukhangela iifonti esekwe kwinkangeleko yazo, igama lefonti, nokuba ziyafana, iisimboli okanye imifanekiso, okanye umntu ozenzileyo (uchwephesha wazo). Ke ngoko, sukumangaliswa kukuba eqala ukukubuza imibuzo ukuba ulahle isiphumo kufutshane kangangoko unakho.
Chonga uhlobo lochwethezo ngeFotohop
Kwimeko apho ungazi, ukusukela ngo-2015 inkqubo ye-Photoshop ikuvumela ukuba uchonge uhlobo lochwethezo, okanye ubuncinci usondele kufutshane. Ikwenza oko ngesixhobo esibizwa ngokuba "kukutshatisa iifonti" (ungayifumana kwi Imenyu yokubhaliweyo).
Ukusetyenziswa kulula kakhulu kuba kuya kusebenzisa i-injini yokuqonda ye-OCR ukuhlalutya umfanekiso okanye imvelaphi kwaye ukwazi ukukuxelela ukuba ngowuphi umthombo ocinga ukuba uhambelana nomfanekiso. Ukwenza oku, isebenzisa i-database ye-TypeKit ethelekisa ifonti kunye neempawu zayo ukufumana iziphumo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Chonga ubuchwephesha
Uyenza njani imiboniso enomdla ngakumbi ngeCanva